ဧရာညီနောင်: Windows Password မေ့နေမယ်ဆိုရင် Reset လုပ်ပေးမယ့်ဆော့ဝဲလ်လေးပါ
ကျွန်တော်က စာများများမရေးနိုင်တော့ ကျွန်တော်တင်တဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေ အသုံးပြုလို့အဆင်မပြေတာ၊တစ်ခြားနည်းပညာ ပို့စ်တွေ အဆင်မပြေတာ ၊ဆော့ဝဲလ်လိုချင်တာ၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပက်သက်လို့ တစ်ခုခုအဆင်မပြေတာကိုဆွေးနွေးမယ် ၊ အကူအညီတောင်းမယ်၊အကြံပေးမယ်ဆိုရင် cbox မှာရေးခဲ့ပေးပါလိုမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်.....
Windows Password မေ့နေမယ်ဆိုရင် Reset လုပ်ပေးမယ့်ဆော့ဝဲလ်လေးပါ
ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းဘီးစီးနေတာနဲ့3ရက်4ရက်လောက်ပို့စ် တွေမတင် ဖြစ်တဲ့ အတွက် နားလည်ပေးကြပါနော်.....း) အရင် တစ်ခါတုန်းက Windows Password Remover ကိုတင်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်အခု Reset Windows Password ဆိုတာလေးကို တင်ပေးပါမယ်.....။ ပထမဦးဆုံးသူ့ကို CD နဲ့ burn ရပါမယ်.....။ burn ပြီးရင်တော့ ကွန်ပျူတာ Password မေ့ပြီး ဆိုရင် burn ထားတဲ့ အခွေကို ထည့်ပြီး Password ကို Reset လုပ်နိုင်ပါပြီ.....။ CD နဲ့ မ burn ချင်လို့ USB နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်လည်း USB ကနေ boot တက်နိုင်ပါတယ်.....။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ.....။ File Size ကတော့ 135 MB ပါ......။
Features Reset Windows Password:
- Simple, intuitive graphical interface.
- Reset and change passwords of local users and administrators, administrators of the domain user accounts, account DSRM.
- Enable and unlock user accounts.
- Turn off the option to password expiration.
- Advanced algorithms for finding the password.
- Support for all versions of Windows, including Windows 7.
- Supports Windows (X64).
- Boot fromabootable CD or USB drive.
Posted by ဧရာညီနောင် at 10:00 AM
Yangon, Burma Weather Forecast
ကျနော့ဘလော့လေးကိုအလည်ရောက်လာပြီး စာတစ်ကြောင်း ၊ ဗဟုသုတတစ်ခု ၊ အသိပညာတစ်ခုတိုးခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါပြီ......။ အားပေးစကား တစ်ခွန်း ၊ ဝေဖန်အကြံပေးစာလေးတစ်ကြောင်း ချန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော့အတွက် အားဆေး တစ်ခွပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.....။
လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်......။ လိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲလ်များရှိရင်လည်း အချိန်မရွေး Сbox မှာရေးပြီးတောင်းခံနိုင်ပါတယ်......။
Alpha Zawgyi လက်ကွက်ပုံ
Zaw Gyi – Home Page
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ ကျော်ခွရန် ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ ibypass.org ibypass.com ibypass.name ibypass.net ibypass.biz ibypass.us ibypass.ws melloyello.org saselinux.com trytux.com cacheless.org diyrollercoaster.com greenrabbit.org hybridstormlabs.com atlantadata.info atlantanap.info balloonscape.info balloonscape.com boxhost.info highendhost.info mariettalighting.info megabandwidth.info megarack.info moblehost.info moblehost.com poweraid.info powerdedicated.info unmetereddedicated.info unmeterededicated.info whitehost.info wireone.info worldsbesthost.info xtrahost.info ##.info Gold Users only ##.co.uk Gold Users only
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ နည်းပညာများ ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ မြန်မာ မိသားစု ဖိုရမ် Mystery Zillion PHP Myanmar မိဘမဲ့ကလေးများ ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ သားသားလေး သားသားလေး ကိုဇော်ဒဂုံရဲ့ ဖန်တီးချက်လေးများ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ် ပဒုမ္မာ(အွန်လိုင်းဂျလေဘီများ) သတ္တမနည်းပညာရပ်ဝန်း မြန်မာချက် အွန်လိုင်း ဖိုရမ် MYSTERY ZILLION PLANET ဖိုရမ် zox စိတ်ကူးတည့်ရာ နည်းပညာ မောင်နိုင် ရာမညမြေ အနက်ရောင် သိန်းငှက်များ STAMEDIA သက်နိုင် myanmarchatonline အိုင်တီ ခရီးသည် ထားဝယ်နေမျိုး AKM စိုးဧပရယ်မွန် သားကြီး hatecupid ရွှေမြန်မာ pmzwfoH ညမီးအိမ် ဇွဲကပင် လောကမီးအိမ် kp-3 နည်းပညာ Ko...Sai...Zaw...Khar သက်တန့်ချို Kg - KOGEE မြန်မာ့နည်းပညာပြန်လည်ဝေမျှရေး ဇောင်း ကဗျာချစ်သူ Kyawswar Nyein သံစဉ် မြန်မာဖိုရမ်
♠♠♠♠♠♠♠♠ မာတီပလိုင်းဥယျာဉ် ♠♠♠♠♠♠♠♠♠ ဇာလီထွန်း ငြိမ်းစိုးဦး ကိုဇော် ကိုဇောင်း သော်တာ စိုးမိုး ကိုသစ်ကို မေသီဝင်း အချစ်မြို့တော် ၀ဿန်မြေ လွင့်မောင်မောင် သီဟသူ မင်းနောင်ရိုး စိုးလေး နိုဝင်ဘာပုလဲ အဖြူရောင် လွင်ပြင် ချစ်သောငှက်ကလေးအတွက် ကိုတိုးကြီး ညီမိုး အွန်လိုင်း သရဲလေး ၀င်းထိုက် ကိုကြီး တောသားလေး နှင်းအိပ်မက် မမ အလင်းစေတမန် ကံ့ကော် သစ္စာ မြန်မာမာတီပလိုင်းသုံးစွဲသူများအဖွဲ့ ပြုပြင်ဆဲ နှလုံးသား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀ နောင်ရိုးစစ် ပဉ္စလက်ဖန်ဆင်းရှင် ကျော်နန္ဒ ကြုံတိုင်းရွာ မြလေးသျှင် နှင်းချယ်ရီ မြန်မာတို့ရဲ့ ပုဂံ ကိုချစ်ထွေး ကိုဖိုးလေး မိုးစက် တစ်ကိုယ်တော် ရွက်လွှင့်ခြင်း သီဟဇော်ရဲ့ အတွေး ပုံရိပ် ခေတ္တမြေမှ ပြည်သားလေး မှတ်မှတ်ရရများ တင်တင်သောင်း မြတ်မင်္ဂလာ နိုင်တာ မီမီ ထားဝယ်သားလေးရဲ့ အိမ် စီစီ သော်ဇင် ဇော်ဇော်ကို လင်းအောင်ပြည့် မောမြေသူလေး မျိုးဆက်သစ် လူငယ် ဖူးစာရှင်လေး ရန်သူတော်ရဲ့ မေတ္တာစံအိမ် နေခြည်နွေးနွေး ဧရာဝတီ ကိုလေး ကိုသစ်ကို အောင်မင်းဦး သိုးဖြူလေး ဝေခွဲမရပါ အောင်ဆန်းလှ သုခချို multiplythemedesign mpgd easythemes mmbrs skylinethemes multiplydesign multiply aupyitkhar beautifulbible pyaephyothaw overlookedthemes customizedthemes mixthemes virgodesign paramitoe realenlightenmentorg u thet mon sakingwe ladyphyu 99nagar mickdior grouped biennho221 notebookofayarwaddy saezarlwin myanmarinfidel memorably htoojune makingburmar
♠♠♠♠ အိုင်တီအတွက်လေ့လာစရာများ ♠♠♠♠ ညီနေမင်း မြန်မာဆိုက်ဘာ NativeMyanmar MyanmarTeaShop သတ္တမနည်းပညာရပ်ဝန်း MyanmarCupid YAMC အလင်းရောင်ဖိုရမ် မောင်ကျော်စွာငြိမ်း မောင်ကျော်စွာငြိမ်း သံလုံငယ် အင်တာနက်အကြောင်း ဘလော့ဂ်အကြောင်း မြန်မာဘလော့ဂ်ရွာ ချယ်ရီမြို့တော် ဆိုင်းနက္ခရဲ့ နည်းပညာမှတ်တမ်း ကိုမြတ် ကိုမြတ် ရွှေမြန်မာ ကိုစေတန် ဖိုးတာတေ အရာတော်မြေ စံပီး မိုးထက်မြင့် သီဟဇော်ရဲ့ အတွေးပုံရိပ် ကိုဇော်ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက် မောင်စေတနာ ကိုရင် ပြည့်စုံ မြန်မာအိုင်တီသမား ကိုကျော်မြင့်ထူး Registry အကြောင်းများသိချင်ရင်
♠♠ တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအတွက် ♠♠ dhammaweb ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃလောကအသင်းတော်ကြီး ဓမ္မစာအုပ်စင် ကြုံရာဆုံရာ နိဗ္ဗာန ဓမ္မမေတ္တာ မဟာစည် E ဓမ္မ ဗုဒ္ဓ fm ဗုဒ္ဓ fm ဗုဒ္ဓ fm burmeseclassic ပိဋက ပါဠိတော် ဦးကောဝိဒရဲ့ ပညာ ဒါန ဓမ္မဆုံချက် ပန်းကမ္ဘာ ဆရာတော်များ၏ ပုံတော်များ ဓမ္မဒေါင်းလော့ မေတ္တာဥယျာဉ် ဖားအောက်တောရ ဓမ္မဒါန ဗုဒ္ဓအလင်းရောင် ဒေါက်တာ အရှင်ပညိဿရ buddhanet မနာပဒါယီ ဓမ္မရံသီ မဟာလယ်တီ ဓမ္မရသ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုခြင်း ဓမ္မစေတီ ဆရာတော် ထေရဝါဒတို့တိုင်းပြည် ထေရဝါဒတို့တိုင်းပြည် ဓမ္မဥပဒေပြန့်ပွားရေး ဓမ္မဗွီယို ဓမ္မရေဒီယို ဓမ္မစာအုပ်များ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်စစ် လင်္ကာဒီပအရှင် အရှင်သာသန ကိုနေလင်း အရှင်တေဇနိယ world Buddhist community ထားဝယ် ဆရာလေး ရွက်ဝါ ဓမ္မအလင်းရောင်ခြည် မနက်ဖြန် လူသားဗုဒ္ဓ- သယံဝသီ ဒေသနာတော် ယေါဟာရ- ကို ရုပ်ဆိုး မင်းဝေ ထေရဝါဒသာသနာ စိုးသူဟိန်း ဓမ္မပန်းဥယျာဉ် ဓမ္မရောင်ခြည် တရားအစုံနာကြားရန် အရှင် ဆန္ဓာဓိက ရဝေနွယ် မင်းကွန်းတိပိဋက သေးအလှူရှင်များအသင်း ဆုရည် ငြိမ်းအေးထွန်း မယ်ရမိ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူလက်တွဲကြစို့ ဓမ္မလင့်များ ဓမ္မအလင်းရောင် ဓမ္မရိပ် သူခရိပ် ထေရဝါဒ လူငယ်များ သူတော်ကောင်းတရား မိုးကုတ်တရား ကိုထွန်းထွန်းလှိုင် ဓမ္မရသ-ကိုအောင်ဆွေဦး ဦးနာထလောက ထေရဝါဒ သာသနာပြန့်ပွားရေးအသင်း အလင်းများ ရှိရာသို့ အောင်မြေ ဝိမုတ္တိသုခ စကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း သစ္စာတရား ယော ဦးကောဝိဒ ဒဿန ခရီး ဗုဒ္ဓဘာသာအလင်းပြမြို့တော် မေတ္တာဝါဒီဆရာတော် သဲအင်းဂူဆရာတော် သီတဂူဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ ဒယ်အိုးဆရာတော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကန္နီဖောင်ဒေးရှင်း ပိုင်းလော့ ဆရာတော် ကျိုက္ကလော့ဆရာတော် ဓမ္မဒူတအရှင်ဆေကိန္ဒ မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ချမ်းမြေ့ဆရာတော် အရှင်ရေ၀တ ဖားအောက်တောရ ဖြူးဆရာတော် world Buddhist community သစ္စာအလင်း လပြည့်ဝန်းလေး မြိတ် ဦးကောဝိဒ ဓမ္မစာစောင်များ
♠♠♠ စာအုပ်၊သတင်း၊မဂ္ဂဇင်း၊ဂျာနယ်များ ♠♠♠ မြန်မာဝတ္ထုစာအုပ်များ ၀ိညာဉ်သစ် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက် mmdailynews တရားဓမ္မစာအုပ်စာပေများ မျှောလင့်ခြင်းရဲ့ရင်ဖွင့်သံ ရွှေစကားမြန်မာစာအုပ်များ ရွှေစကားမြန်မာစာအုပ်များ Myanmar Book Shop သံလွင်အိပ်မက် လောကအလှ ရွှေစကား ebooks ၀ိညာဉ်သစ်မြန်မာအွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် လောကနတ်စာပေ မြန်မာ Ebook များ Clissic Books Shelf Burmese မြန်မာ Elibrary My Thought-မြန်မာစာအုပ်များ စကားဝါမြေ Serene Ebook Conner Books Hive eleven ELEVEN ဂျာနယ်စုံ PLANET myanmar အင်တာနက်ဂျာနယ် အောင်မြင်ခြင်း မဂ္ဂဇင်း မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်လေး People Online Magazine မြန်မာ့အလင်း ဈေးကွက်ဂျာနယ် ခေတ်လူငယ် မိုးသောက်ကြယ် မြန်မာတိုင်းမ်(စ်) လျှပ်တစ်ပြတ် All Channel For Myanmar ရွှေစကား Myanmar today ( by English )
♠♠♠♠♠♠♠ ရောက်ခဲ့သောနေရာများ ♠♠♠♠♠♠♠ NAISITHU နှင့် သူငယ်ချင်း မိုးထက်မြင့် အရာတော်မြေ အနန္တမေတ္တာအသင်း ကိုဇော်ရဲ့ စိတ်ကူး အိပ်မက်များ အရှင်ကေလာသ မောင်လေး ခေတ်လူငယ် သီချင်းများ မြန်မာသီချင်းများ အဖြူရောင်မေတ္တာ မနာပဒါယီ တက္ကသီလသောတုဇန အိတ်ဆောင် တိပိဋက အရှင်ကုသလသာမိ ကျနော့် မှတ်စုစာအုပ် ညီနေမင်း manawthar နည်းပညာ မြန်မာ ebooks mymcnews mixpod mymclub mmgamers ရေဒီယိုကုဒ်များ ယူရန် ပုံကုဒ်များ ယူရန် ပုံကုဒ်များ ယူရန် ရွှေ web hosting Codes & HTML Help Comment Box Generator လုပ်ရန် Myspace Contact Boxes ကုဒ် ၀ိမုတ္တိရသ ကိုရင်လေး အဖြူရောင်သံစဉ် mp3 ကုဒ်များ mp3 ဒေါင်းလော့ မိုးလေ၀သ မြိတ် ဦးကောဝိဒ
♠♠♠♠♠♠♠♠ မြန်မာလူငယ်မီဒီယာ ♠♠♠♠♠♠♠♠ mmyouthmedia Forum Myanmar Family Forum Myanmar Engineer Forum Myanmar Chatonline Forum Myanmar Native Forum myanmargenius Forum linyaungForum it4mmForum engineer forum good myanmardaily myanmarforum Forum padonma Forum apytzForum mysteryzillion Forum mmwordpressForum
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ ရောက်ခဲ့သောနေရာများ ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ ကွန်ပျုတာဂျာနယ် အင်တာနက်ဂျာနယ် မြန်မာတိုင်းဂျာနယ် လျပ်တစ်ပြတ်ဂျာနယ် ဈေးကွက်ဂျာနယ် ရန်ကုန်တိုင်းဂျာနယ် action ဂျာနယ် ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် ဖတ်ပါသတင်းဂျာနယ် Eleven ဂျာနယ် အခွင့်အလမ်းဂျာနယ် အလင်္ကာဂီတဂျာနယ်
People Online မဂ္ဂဇင်း
ပီစီဝါလ်(ဒ်) မြန်မာ မဂ္ဂဇင်း
English - မြန်မာ အဘိဓာန်
Myanmar Tele: Directory
♠♠♠♠ ဘောလုံးပွဲတိုက်ရိုက်ကြည့်မယ် ♠♠♠♠ Free Live Sports TV myp2p4.Net Hostream.Net firstrow.net xmarks.com/site/www.p2p4u.net matchhighlight.com goalstube.com မြန်မာပွဲကြည့်ရန်
♠♠♠♠♠ ဘောလုံးနှင့်ဆိုင်သောဆိုဒ်များ ♠♠♠♠♠ SoccerMyanmar mutdfan MyanmarNationalLeague kbzfc first-11 ရတနာပုံ အက်ဖ်စီ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် မြန်မာဂိုး သရဲနီတို့ပျော်စံရာ ကြိုးကြာနီတို့ဆုံမှတ် မြန်မာချဲလ်ဆီးဖန်များ ဒီဗီဘီ
♠♠♠♠♠♠♠ အားကစားသတင်းများ ♠♠♠♠♠♠♠ ESPN Man U Fan livescore မြန်မာနေရှင်နယ်လိဒ် soccer myanmar dvbsports eleven ဂျာနယ်များ myanmargoal world soccer news soccernews foxsports worldsoccer teamtalk guardian fifa soccer europe skysports
1 ft 12 inch
1 ft 30.48 cm
1 cm 10 mm
1 mile 5280 ft
1 m 3.2808399 ft
1 km 3280.8399 ft
1 km 1000 m
1 mile 1.609344 km
1 acre 43560 sq ft
1 sq mile 640 acres
ယနေ့ကြွလာ မိတ်သဟာ ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။ ဥပါဒ်ရန်ဘေး ကင်းစင်ဝေး ၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
♠♠ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ♠♠
ဧရာဝတီသားလေး. Powered by Blogger.
Copyright (c) ဧရာညီနောင် - Blogger Templates created by Deluxe Templates - Wordpress by Newwpthemes.com